Famelabelarana ny mozika 5 Common programming - ITS Tech School
5 Mey 2017
Fametrahana angano 5 Common programming
Satria ny rindrambaiko dia manolo ny asa amin'ny indostria isan-karazany, ireo mpandrindra ny ordinatera dia tadiavina kokoa noho ny fotoana rehetra ao anatin'ny fahatsiarovana vao haingana. Raha toa ka manana fahaiza-manao manokana ny mpamolavola iray, dia mety ho sarotra kokoa noho ny any amin'ny sehatra maro samihafa ny fahitana asa goavana amin'ny fandaharana, izay midika fa afaka manofa ny fanonerana sy ny tombontsoa izy ireo.
Na izany aza, raha toa ka mety ho lafo ny fandaharam-pamokarana, dia mbola tsy sembana ny miditra amin'ny sehatry ny programa noho ny fisafotofotoana matetika momba ny orinasa. Ireto misy angano dimy fototra momba ny fandaharana sy ny antony tsy tena marina.
Hevi-diso #1: Mpilalao programa no milalao ary tsy miasa
Ny tantaran'ny latabatra ping pong sy kilalao an-tariby ao amin'ny fikambanana teknika dia nanome fampitahorana ho an'ireo mpamorona azy. Voambara ny marina, matetika ny mpandrindra dia mandany ny menaka mamatonalina, mandamina ny fandaharana tsy misy fikomiana.
Maro ireo rindrambaiko rindrambaiko no miasa ora azo atao, na tsy miasa na miasa any an-trano na mandeha any amin'ny birao isan'andro, raha tsy hoe tsy midika izany fa mandany ny androm-piainany. Matetika izy ireo no manao ny asabotsy sy ny faran'ny herinandro, indrindra rehefa ao anaty orinasa lehibe izy ireo.
Hevi-diso #2: Mpiasa avokoa ny rehetra ary tsy milalao
Miasa mafy ireo programera - saingy amin'ny fanaraha-maso mendrika ny mpandraharaha, dia tsy mila oviana ny herinandro mahazatra 40 ora. Zava-dehibe ny fampiroboroboana rindrambaiko ho an'ity angon-drakitra ity rehefa mikaroka fiantsoana. Moa ve ny orinasa manosika ny mpanjifa izay mandray anjara amin'ny fanitarana dia mitsambikina mandritra ny fe-potoana mampihetsi-po, sa ny mpandrindra dia manantena fa mety hijanona ela kokoa?
Amin'ny alàlan'ny lazaina ho ireo mpilamina, ireo mpandrindra fikandrana, ireo mpandraharaha izay mamely amin'ny tsy misy ny fepetra tonga lafatra toy ny fitsipika dia afaka mamela ny mpivady hitohy sy hitady kolontsaina ambonimbony kokoa.
Hevi-diso #3: Mpikatroka tsy an-kiato
Mety ho efa henonao angamba fa ireo mpandahateny dia olona misedra fiasa ara-tsosialy izay misakana ny olona hijanona amin'ny ora maro miaraka amin'ny ordinatera sy sakan'ny Cheetos. Tahaka izany, ireo mpandrindra ny androany dia matetika no miara-miasa amin'ny mpiara-miasa, manitatra ny filoha, ary ny mpanjifa farany. Ity no fomba ahafahan'izy ireo manangona antontan-kevitra momba ny rindrambaiko tokony ho noforonina.
Ireo solontenan'ny maro dia mandany ny ampahany betsaka amin'ny andrana isan-karazany amin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny ordinatera sy gadget hafa. Amin'izany fomba izany dia tsy tena mahagaga loatra ny mpandrindra.
Hevi-diso #4: Ny software dia manao ny asa rehetra
Eny, misy fitaovana maro izay mahatonga ny fiainan'ny mpandia programa ho tsotra kokoa. Raha tokony ho ny fampivoarana ny fampiharana tsirairay avy amin'ny scratch, dia takatr'ireo mpanamboatra azy ireo fa afaka miankina amin'ny code misy izy ireo izay manao ny asa ho azy ireo. Ity fango ity dia avy amin'ny tranomboky izay efa nosedraina amin'izao fotoana izao, ary misy bug ireo mialoha ny fandaminana azy ireo amin'ny fampiharana azy.
Raha mbola afaka manavotra ireo tranomboky ireo, ny mpandrindra dia tokony hanana ny fahafahana hanova ny code mba ahafahana mifanaraka amin'ny sehatra iray tsara, izay afaka mitaky fepetra betsaka kokoa noho ny famaritana azy avy amin'ny scratch.
Hevi-diso #5: Ny programera dia matiaty matematika
Mazava ho azy, ny tsy fahaizan'ny fiarahamonina fa mpahay matematika no manendry mpandrindra. Raha ny marina, ny code composite dia saika tsy misy ifandraisany amin'ireo kilasy ny fanadihadiana natao tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy ny sekoly. Na izany aza anefa, ny matematika azo itokisana dia afaka manome ny fandaharam-pamokarana mahavariana hamoronana ny code.
Na izany aza, raha ny ankamaroan'ny tranokala sy ny môdily no ampiasaina hanamboarana ny fampiharana amin'izao fotoana izao, dia azo averina amin'ny fomba mahomby ny famakafakana. Na inona na inona mety tsy hijerena ny tenanao amin'ny maha-tarehy anao, dia mety ho hita fa mamantatra ny matematika azo itokisana ary mety ho marika mendrika ny fandaharana ny fiantsoana anao.
Ny mpandrindra dia afaka ny ho manam-pahaizana manokana indrindra amin'ny raharaham-barotra rehetra. Na ahoana na ahoana, dia manana asa mahafa-po azy ireo koa izy ireo, izay manome azy fandaniam-potoana be. Rehefa manaiky ny fahaiza-manaony izy ireo ary manangana fomba fijery mahatalanjona, dia matetika izy ireo dia afaka miantso tahiry mahavariana ary manome fiainana izay mahatonga ny asa mazoto rehetra hohamarinina, na dia eo aza ny olana rehetra.
Mahaliana momba ny programa? Maninona raha mba mifidiana fiteny fandaharana iray mba hianatra aloha!
Inona ny Time Protocol (NTP)? | Torolalana feno